Shirkii Kismaayo ee Maamul Goboleedyada oo qarka u saaran in la hakiyo iyo Itoobiya oo Axmed Madoobe u sheegtay... - Caasimada Online
Home Warar Shirkii Kismaayo ee Maamul Goboleedyada oo qarka u saaran in la hakiyo...
Shirkii Kismaayo ee Maamul Goboleedyada oo qarka u saaran in la hakiyo iyo Itoobiya oo Axmed Madoobe u sheegtay…
Kismaayo (Caasimadda Online) – Wararka hadda naga soo gaarayo Magaalada Kismaayo ee xarunta Maamulka Jubblanad ayaa sheegayo in laga yaabo inuu hakad ku yimaado Shirkii la filayey inay Maamul Goboleedyada halkaas ku yeeshaan.
Sida xogta rasmiga ah ay ku heshay Caasimadda Online Wasiirka amniga dowlad-gobolleedka Jubbaland,Cabdirashiid Xasan Nuur (Janan) iyo Generaalka hoggaaminayo Ciidamada Itoobiya ee ku sugan Gedo Korneel Ababu ayaa xalay soo gaaray Magaalada Kismaayo si ay Axmed Madoobe xoog ugu saaraan inuu joojiyo Shirkaas.
Generaalka iyo Wasiirka Amniga ayaa Axmed Madoobe u sheegay inuu si deg deg ah uga laabto go’aanka uu kaga dhawaaqay Kismaayo ee ah inuu madaxda Maamul Goboleedyada kulan u qabto.
Waxaa loo sheegay Axmed Madoobe inay waligood shiri jireen Madaxda Maamul Goboleedyada iyo dowladda isla markaasna ay lagama maarmaan tahay in kulan kasta oo la qabanayo ay dowladda Soomaaliya wax ka ogtahay.
Xaaladda Siyaasadda Maamulka Axmed Madoobe ayaa meel xun mareyso waxaana laga yaabaa inuu Axmed Madoobe saacadaha soo socdo ku dhawaaqo in gebi ahaanba la joojiyey shirkaas, sidoo kalana waxaa la kala diri doonaa guddigaas shirka loo saaray.
Generaalka ugu sarreeyo ciidamada Itoobiya ee Gedo General Ababu ayaa Madaxweynaha Jubblanad Axmed Madoobe ku amray inuu joojiyo faragelinta uu ku hayo dowladda Soomaaliya, waxayna xogta hoose sheegeysaa inay xaaladda meel xun mareyso.
Wixii warar ah ee kusoo kordha waan idinla socodsiin doonaa Inshaa Allah iyo weliba go’aamada soo baxo: